Decarbonizer piston izindandatho - yinqubo ekususeni umule zanqwabelana ezindongeni piston, isb we coke okuyinto akhiwa ngenxa amandla omlilo uphethiloli emoyeni ingxube injini.
Ingqikithi yale nqubo itholakala ezifakwa ziba ngcono kanye nokuqedwa yabo okwalandela. Ukuze wenze lokhu, abanye basebenzisa amathuluzi akhethekile, amakhemikhali yezimoto uthenge usifake amasilinda ngokusebenzisa izimbobo inhlansi ipulaki. Abanye ngenxa yokwethuka baphendukele esiteshini inkonzo, ukuchitha izindodla zemali amasevisi iziteshi (ukuthi kungakanani la masevisi, sizokwazi ekupheleni isihloko). Namuhla singathanda cabanga kahle kakhulu futhi ephumelelayo indlela yonke imali kusukela isilinda zingalungiswa ngokwakho.
Okokuqala Decarbonizer piston indandatho iqala ukuba uyasikrufulula amakhandlela. Okulandelayo, kufanele sembathe zonke pistons kule sikhundla phakathi. Ukuthatha lokhu Jack sikhulisa phambi (uma RWD - emuva) wemoto, vula yesine isivinini igiya bese upheqela wheel motor ngoba, sokunquma yokuma pistons esebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela lokususa ngokusebenzisa plugholes.
In the isinyathelo esilandelayo Decarbonizer piston izindandatho ephelezelwa ekubunjweni elikhethekile elithi "Surma-Decarbonizer". Ukuthululela kufanele sibe piston ngokusebenzisa inhlansi ipulaki imbobo ukuvuleka. Lokhu arcade kwenziwa ngosizo abezokwelapha isipetu 10-ml. Ngesinye isilinda 25 kwanele ukubeka namamililitha okusamanzi. Njengoba izimoto iningi abe izinjini 4 cylinder, ibhodlela 100 namamililitha kuzoba nje ngokwanele.
Ngaphezu kwalokho elinde imizuzu 15-20, kuze kube imali eyisibambiso emtarini zathukululeka. Kuyinto efiselekayo ngalesi sikhathi ukubona ukuthi uketshezi hit ngokunembile iringi. Kuze kube manje uhlelo piston Ungahambisa phezulu naphansi bese uphendukisa isondo othumele 5-10 degrees. Lokhu kumele kwenziwe njalo ngemva kwemizuzu engu-15 kuze kube isixazululo akuyona ngokuphelele ebusweni ngomshini.
Ngemva kwalokho Decarbonizer piston izindandatho, ngezandla zabo ekhiqizwa, kulandele ukususwa central high-voltage wire tramblora ikhava. ingxenye Imi yodwa ukulungiswa phakathi steel ithiphu futhi phansi nge lamashumi 5-10 mm. Uma lokhu Vaz "zabuna" lomndeni, cap nangokuvikela zingafakwa phakathi ikhava valve futhi ubakaki uphethiloli hose. Kungani lo wenze oku? Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi bukabuk motor ukuziqalela akazange kuphakama iloli kwekhoyili ukuthungela.
Manje ukuthi izintambo esiyikho isimo ezazilengisiwe, cisha imoto nge ukuwudlulisa ngemizuzwana wokwenza ukuziqalela cranking 10. Ngakho ukuxosha asele amasilinda ketshezi.
Zonke Decarbonizer piston izindandatho yabhujiswa. Manje kufanele ukuqoqa wonke izinto emuva ukwenza ukuvivinya run yenjini, kuyilapho ngokucindezela phezu isinyathelo igesi.
Futhi uyazi ukuthi kungakanani esiteshini sevisi ezifana Decarbonizer piston izindandatho? Intengo ezinsizakalweni ezifana kakhulu - ecishe ibe yizinkulungwane 3 ruble ngokuba four cylinder uphethiloli injini.
Ungathatha kanjani i-geyner ngaphandle kokulimaza umzimba?
Thola ukuthi ungasetha kanjani ukugcina lokushisa e abadala kanye nezingane